मंगल दोषबाट मुक्ती पाउनको लागी मंगलवार यो बिधिले हनुमानको पुजा गर्नुहोस..! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/मंगल दोषबाट मुक्ती पाउनको लागी मंगलवार यो बिधिले हनुमानको पुजा गर्नुहोस..!
मंगल दोषबाट मुक्ती पाउनको लागी मंगलवार यो बिधिले हनुमानको पुजा गर्नुहोस..!
मंगल दोष दुर गर्ने बिधि
मंगल ग्रहको पुजा मंगल ग्रहको आफ्नो दिन मंगलवार हो अत: मंगलवारको दिन व्रत (उपवास) राखौ र साधना पूजन गरौ भने अत्ति उतम्म हुन्छ। मंगलवारको दिन सूर्योदय भन्दा पहिले (पहले) उठेर निवृत्त भएर तन-मन लाइ स्वच्छ गरौ। त्यसपश्चात रातो रंगको नया वस्त्र धारण गरेर मण्डपमा उत्तर दिशा तिर मुख गरेर बसौ।
मण्डप घरको कुनै कोठामा बनाउन सक्नुहुन्छ। किंतु फर्श कच्चि छ भने गाईको गोबरले लीपेर शुद्ध बनाउ र यदि पक्कि फर्श छ भने फर्शलाइ पुछेर तथा गुलाब जल आदि छर्केर पवित्र गरौ। आसनमा बस्नु पूर्व आवश्यक सामग्री जस्तै रातो पुष्प, रातो चंदन, कुशा, सुद्ध घी आदि तयार गरेर आफु निकट रखौ।
तत्पश्चात पवित्री धारण गरेर मंत्रोच्चारण सुरु गरौ-कुनै पनि शुभ कार्य आरम्भ गर्दा समय विघ्नहरण भगवान गणेशजीको पूजा हुन्छ, जो कि समस्त विघ्नलाइ दुर गरेर साधकको साधना पूर्ण गर्नु हुन्छ
मंगलवारको व्रतका लागि बिहान स्‍नान गरेर ईशान कोण यानि उत्तर-पूर्व दिशामा कुनै स्‍वच्‍छ स्थानमा हनुमान जी को मूर्ति स्थापित गरौ। यस मूर्तिको अघि घीउको दीपक जलाउ, चमेलीको तेल लाई चर्किउ र रातो या पहेलो रंगको फूलको माला चढाउ। त्यस पछि हनुमान चालीसाको पाठ गरेर सभैलाई प्रसाद बाटौ र पुरै दिनमा मात्र एक पटक भोजन गरौ। रातमा पनि एक पटक फेरि हनुमान जी को पूजा गरौ या दीपक जलाएर प्रणाम गरौ। यस दिन हुनुमान जि लाई सिंदूरी रंगको कपडा चढाउ र दान गरौ।
गंगालालका बिरामीमा कोरोना पुष्टि : आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द
मेस्सीको गोलमा बार्सिलोनाको अग्रता फराकिलो
दुबई विमानस्थलमा अड्किएका नेपाली लिन निगमको जहाज उड्यो
काठमाडौ । कोरोना भाईरसका कारण विश्वको सबभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिकाको बढी नोक्सान भएको छ । कोरोनाबाट अमेरिकामा सबैभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने त्यहाँको आर्थिक अबस्था पनि निकै गिरावट आएको छ
नेपालमा एकैै दिनमा कोरोना संक्रमणबाट